TOP NEWS | Mandheera News
Hargeysa(Mandheeranews)- Ismaaciil Aadan Cismaan (Ismaaciil Yare) oo ka mid ah Masuuliyiinta sarsare ee Xisbiga Waddani, ayaa sheegay in murrashax iska sharaxay Xisbigoodu, uu dhuumalaysi ku jiro, iyada oo ay raadinayaan Ciid...
In ciidammadii Eriteriya lagala baxo Tigreega. Inkasta oo ay Labada dal ee Itoobiya iyo Eriteriya ayaa beeniyay ku lug lahaanshaha Eritrea ee colaadda Tigray. Ka bixitaanka "xoogaggii kale ee soo duulay". Ciidamada Amxaara...
Hargeysa (Mandheeranews)- Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, ayaa la filayaa in maalmaha soo socda amma toddobaadyada foodda innagu soo haya inuu isku shaandneyn ku sameeyo Golaha Xukuumaddisa. ...
Hargeysa(Mandheeranews)-Dadweynaha ku dhaqan Xaafada Cabaaye ee Magaalada Hargeysa, ayaa ka gadooday Waddo gacanku Rimis ay ku sheegeen oo ay dawlada hoose ee Hargeysa hada ka wado dhismaheeda Xaafadaas.Dadweynaha ayaa ka cab...
Gudoomiyaha Xisbiga cadaalada iyo daryeelka ee Ucid ayaa maanta ku dhawaaqay War murtiyeed u dhignaa in 25 bishan 2aad ay ku eeg tahay Soo gudbinta araajidii Musharaxiintu Sidoo kalena 10 ka bisha 3 aad ayaa lakala Hufi doona...